दशैंमा प्रहरीको नयाँ सुरक्षा योजना, कस्तो छ तयारी ?:: Naya Nepal
दशैंमा प्रहरीको नयाँ सुरक्षा योजना, कस्तो छ तयारी ?
चाडपर्वमा हुने अपराधका घटनालाई मध्यनजर गरेर महानगरीय प्रहरी कार्यलयले उपत्यकामा विषेश सुरक्षा तैनाथी गर्ने भएको छ ।
कोरोना कहरका बिचमा मानिसहरू घरमा हुने भएकाले व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनसक्ने चोरी डकैती र अपराधका घटनालाई मध्यनजर गर्दै तैनाथी बढाउने भएको हो ।
दशैँमा कोभिडको कारणले र चाडको कारणले उत्पन्न हुनसक्ने अपराधलाई घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले उपत्यकामा महानगरीय प्रहरी कार्यलय रानीपोखरीले प्रहरीले सुरक्षा योजना ल्याएको हो ।
हरेक बस्तीका प्रहरीको गस्तीको व्यवस्था, सादा पोसाकमा प्रहरी एम्बुसिङको व्यवस्था, पुराना अपराधीहरूको खोजी गर्ने र विगतमा चाडपर्वमा अपराधका घटनाहरू भएका ठाउँको डाटा अध्ययन गरेर प्रहरी खटाउने काम भएको महानगरीय प्रहरी कार्यलय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेलले बताए ।
‘चाडपर्वमा विगतमा भएका घटनालाई अध्ययन गरेर उपत्यकाका धेरै घटना हुने ठाउँमा प्रहरीको तैनाथी बढाउने काम गरिरहेका छौं,’ डीआईजी पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।
कोभिड–१९ को कारणले यो बर्षमा उपत्यका छोडेर मानिसहरू कति जान्छन् ? यदि मानिसहरू बाहिर नगएको खण्डमा प्रहरी आँखा व्यवसायीक क्षेत्रमा जानेछ । चाडपर्वको समयमा मानिसहरू घरमा रमाइलो गर्ने तर मानिसहरूको उपस्थित नभएको व्यवसायिक ठाउँमा चोरी डकैती हुने भएकाले प्रहरीको आँखा त्यता रहेको डीआईजी पोखरेलले बताए ।
‘चाडपर्वमा मानिसहरू घरमा रमाइरहेको समयमा व्यवसायीक ठाउँ वा भवनहरूका चोरी डकैती हुने भएकाले प्रहरीको आँखा त्यता हुनेछ,’ डीआईजी पोखरेलले भने ।
चाडपर्वको समयमा अप्रिय घटनाहरू हुन नपाउन भन्नको लागि प्रहरी सधै तैनाथ रहेको पोखरेलले बताए ।
फरार अभियुक्तमा प्रहरीको आँखा
जनताको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा फरार भएका अपराधीहरूको पक्राउले पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने प्रहरी पछिल्लो अनुसन्धानले देखिएकोले उपत्यकाको प्रहरीको आँखा अदालतले अपराधी तोकेका प्रहरी अभियुक्त र अपराधीको खोजी कार्यमा लागि परेको डिआइजी पोखरेलले बताए ।
‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्न फरार रहेको अपराधी पक्राउले पनि महत्वपूर्ण भुमिका देखियो, त्यसैले हामीले फरार अपराधी पक्राउमा ध्यान केन्द्रित गरेका छाैं,’ डीआईजी पोखरेलले बताए ।
अहिले उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिने अघिल्लो बर्षको तुलनामा धेरै कम देखिएको महानगरीय प्रहरी कार्यलयले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण मानिसहरूले यात्रा कम गर्ने भएकाले अघिल्लो बर्षको तथ्याङ्क अहिलेको सोहि समयको तथ्याङ्क हेर्दा निकै कम भएको डीआईजी पोखरेलले बताए ।
पोखरेलका अनुसार अहिले उपत्यका भित्रिने मानिसहरूको संख्या बढी देखिएको छ ।
चौधरी ग्रुप भन्छ– ४ वर्षमा ३९ अर्ब राजस्‍व बुझायौं
काठमाडौं । धनीहरूको सूचीकरण गर्ने संसारको प्रख्यात पत्रिका फोर्ब्सको सूचीमा १ हजार ५१३ औं स्थानमा रहेको चौधरी ग्रुपले गत चार वर्षमा मात्र समूह र सम्बद्ध कम्पनीमार्फत सरकारलाई रु.३८ अर्ब राजश्व बुझाएको जनाएको छ । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रख्यात उद्यमी विनोद चौधरीले राष्ट्रलाई व्यक्तिगतरुपमा उल्लेख्य मात्रामा कर नबुझाएको विषयमा बाह्रखरीले जिज्ञासा राख्दा चौधरीको सचिवालयले यो जानकारी उपलब्ध गराएको हो ।
कुनै पनि कर्पोरेट कम्पनीले बढीभन्दा बढी रकम नयाँ लगानीमा प्रयोग गर्ने हुनाले व्यक्तिगत आम्दानीको रुपमा धेरै रकम नदेखिने र सोहीअनुसार करको रकममा पनि फरक पर्ने पनि सो विवरणमा जनाइएको छ ।
भारतका मुकेश अम्बानी (सम्पत्ति ६४ अर्ब डलर) सो देशको मात्रै नभई एशियाकै धनी र विश्व धनीको सूचीमा दश नंबरमा पर्छन् । तर, भारतमा उनले व्यक्तिगत आम्दानीमा तिर्ने कर अरुको भन्दा निकै कम हुने गर्दछ । जस्तो, भारतमा व्यक्तिगत कर धेरै तिर्नेमा अमिताभ बच्चन, सलमान खान वा अक्षय कुमार पर्दछन् । सो विषयमा थप स्पष्ट पार्दै विवरण भन्दछ, “अमिताभ बच्चनको कुल सम्पत्ति ४ सय मिलियन डलर छ । जबकि अम्बानीको कुल सम्पत्ति ८५.१ बिलियन डलर छ ।”
“सबैभन्दा धनी गणना हुने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत होइन उनीहरूबाट प्रबद्र्धित कम्पनीहरुले कमाउने आम्दानीको आधारमा बढ्ने शेयर मूल्यको गणना हुन्छन् । यहि गणना विधीको आधारमा फोब्र्सले पनि धनाढ्यको सूचीको कुल सम्पत्तिको ‘रियल टाइम’ अपडेट गर्ने गर्छ । कम्पनीहरुले कमाउने आम्दानी र बढ्ने शेयरका आधारमा मुलुकको राजश्वमा पनि योगदान हुन्छ,” सो विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले उठाउने राजश्वमा चौधरी गु्रपआबद्ध संस्थाहरुले झन्डै २ प्रतिशतको योगदान गर्दै आइरहेको आन्तरिक राजश्व विभागको तथ्याँकले देखाएको छ । चारवर्षमा चौधरी गु्रपका आफ्नै र आबद्ध कम्पनीहरुले ३९ अर्ब १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । ग्रुपले ‘इनहाउस’बाट ३१ अर्ब १४ करोड ४३ लाख र आफूआवद्ध कम्पनीमार्फत ७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व राज्यकोषमा दाखिला गरेको पाइएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा ५ अर्ब ८९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व दाखिला गराएको थियो । सोही वर्ष आफू आवद्ध कम्पनीबाट ग्रुपले १ अर्ब ९८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको हो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा ग्रुपबाट ७ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । आफूआवद्ध कम्पनीबाट सोही वर्ष २ अर्ब ३ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।
विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार २०७५–०७६ मा ग्रुपले ९ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ र ग्रुपआवद्ध कम्पनीले २ अर्ब १० करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ग्रुपले ८ अर्ब ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ बुझाएको देखिएको छ । चौधरी ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीले १ अर्ब ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको हो ।
ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार २०७३–०७४ मा ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ आयकर बुझाएको छ । त्यसपछिका दोस्रो र तेस्रो आर्थिक वर्षमा निरन्तर ३८ करोड ४६ लाख र ४० करोड ५१ लाख रुपैयाँ आयकर बुझाएको तथ्यांकमा देखिएको छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा भने कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर परेकाले झण्डै ५० प्रतिशत आयकर घटेको छ । तथ्यांक अनुुसार गत आर्थिक वर्षमा २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आयकर बुझाएको छ ।
ग्रुपले चार वर्ष अघि २ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क बुझाएको छ । त्यसको पछिल्लो वर्ष ग्रुपले झण्डै एक अर्ब भन्दा बढी अर्थात ३ अर्ब २६ करोड १६ लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क बुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकबाट देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ र २०७६–०७७ मा क्रमश ४ अर्ब ६३ करोड ४ लाख र ३ अर्ब ७४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको देखिएको छ । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले गत आर्थिक वर्षमा भने अन्तशुल्क घटेको छ ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा २ अर्ब ४९ करोड ७ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बझाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा २ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भ्याट बुझाएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । आर्थिक वर्षमा २०७६–०७७ मा २ अर्ब ८० करोड ५५ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चौधरी ग्रुपले बुझाउने भ्याटमा पनि केही प्रतिशत गिरावट आएको छ ।
त्यसबाहेक चौधरी ग्रुपले ४ वर्षको अवधिमा ४ अर्ब ७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भन्सारमार्फत राजस्व बुझाएको छ ।
चार वर्षको अवधिमा चौधरी ग्रुपले एक अर्ब ३२ करोड ५८ लाख आयकर बुझाएको छ । त्यसैगरी १३ अर्ब ९९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क बुझाएको छ । चौधरी ग्रुपले चार वर्षको अवधिमा ११ अर्ब ५८ करोड २६ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाएको छ ।
चौधरी ग्रुप आवद्ध कम्पनीहरुले राज्यलाई राजश्वमा ठूलो योगदान पुराइरहेको भन्दै चौधरीको सचिवालयले भनेको छ, नबिल बैंक, नबिल इन्भेष्टमेन्ट, यूनाइटेड फाइनान्स लिमिटेड, यूनाइटेड इन्स्योरेन्स, हिमाल हाइड्रो, समिट होटल र भिभान्त होटलमा चौधरी ग्रुप आवद्ध छ । सो कम्पनीहरूबाट पनि सरकारलाई ठूलो परिमाणमा राजस्व आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा नबिल बैंकले १ अर्ब ६८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ राज्यलाई करबापत बुझाएको छ । त्यसैगरी, २०७४–०७५ मा १ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा १ अर्ब ९४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाएको तथ्यांकबाट देखिएको छ । त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६८ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई बुझाएको छ ।
नबिलले बैंक स्थापना भएदेखि राज्यलाई १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ । यो भनेको बैंकको कुल पुँजीको १ दशलमव ५ ‘टाइम्स’ बढी अर्थात १५० प्रतिशत हो । नेपालको निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक नबिलले आफ्ना लगानीकर्तालाई हालसम्म १ हजार ८ सय ७५ प्रतिशत लाभांशसमेत वितरण गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी, नबिल इन्भेष्टमेन्टमा पनि चौधरी ग्रुप आवद्ध छ । सो कम्पनीले पनि चार वर्षको अवधिमा ९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । त्यसैगरी, यूनाइटेड फाइनान्सले २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ ।
युनाइटेड इन्स्योरेन्सले पनि चार वर्षको अवधिमा २१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व राज्यकोषमा बुझाएको छ । हिमाल हाइड्रोले पनि १६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । समिट र भिभान्ता होटलले क्रमश ७ करोड ९६ लाख ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको तथ्यांकबाट देखिएको छ ।
चौधरी ग्रुपका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा कुल सरकारी राजस्वमा चौधरी ग्रुप र त्यससँग आवद्ध कम्पनीले १ दशमलव ५९ प्रतिशत योगदान पु¥याएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा १ दशमलव ६४ प्रतिशत चौधरी ग्रुप एक्लैको योगदान थियो । गत आर्थिक २०७३–०७४ को तुलनामा २०७४–०७५ मा राजस्वको योगदान बढेको तथ्यांकबाट देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा पनि ग्रुप र त्यससँग आवद्ध कम्पनीको राजस्वमा योगदान १ दशलमव ६८ प्रतिशत रहेको छ । तथ्यांकलाई हेर्दा हरेक वर्ष चौधरी ग्रुप र कम्पनीले बुझाउने राजस्वको योगदानको प्रतिशत बढ्दै गएको देखिएको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा भने समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव परेपछि चौधरी ग्रुपले बुझाउने राजस्वको योगदानमा पनि कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी राजस्वमा चौधरी ग्रुप र त्यसअन्तर्गतका कम्पनीको योगदान १ दशमवल ४८ प्रतिशत रहेको छ ।